Maitiro Ekukora Chinangwa Chinokunda muE-Commerce Game | Martech Zone
Muvhuro, July 14, 2014 Kelsey Washington
Panguva iri muWorld Cup panogona chete kuhwina, makambani mazhinji anogona kuwana budiriro mumutambo wee-Commerce. Kune akaratidzirwa matekinoroji ayo akabatsira vatengesi kuverenga. Baynote inokuratidza maitiro ekumisikidza vatambi vakanakisa uye nekugadzira ine simba mutambo mutambo kuti yako e-Commerce bhizinesi riunze kumba kuhwina.
Mwaka usati watanga, zvikwata zvinofanirwa kutanga zvaisa mari muvatambi vepamusoro. Kana zvasvika kune e-Commerce 5 kunze kwegumi inonyanya kukosha mari dzevatengesi dziri mukushambadzira. 10% yevatengesi vanoita mari mukutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga uye kuwanikwa kwevatengi, 56% mukuchengetwa kwevatengi, 51% mune akagadziridzwa mapeji akakosha, uye 48% muSEO. Mune infographic pazasi, Baynote inopa data kubva ku14 yegore Merchant Survey, inoratidza uko vatengesi vari kuisa mari, maonero avanoona izvo zvinoda kushandurwa uye zvido zveanotenga, uye marongero api anounza ma ROI akakurisa.
Tags: kutyaira kutengesae-zvokutengeseranaecommerce kutengesanharembozha e-commerceRoyimukombe wepasi rose 2014
5 Nzira Nzira Yekusvikira-Yakavakirwa Kushambadzira icha Kanganisa Vatengi Kutenga
Jul 21, 2014 pa 3: 38 AM
Ndakasvika pakuziva zvinhu zvakawanda zvitsva zveiyo e-commerce saiti uye ini handina chokwadi chekuti izvi zvinondibatsira zvakanyanya. Ndakafarira kuona kweruzivo pano uye ndichashanda zvakafanana.